Mebere kiiboodu online gị na saịtị ma ọ bụ blog | Loderi.com
Ọ bụrụ na gị na saịtị ọbịa pịnye ke ya mba asụsụ na e nwere ọbụna obere ohere na gị ọbịa na-adịghị chọrọ kiiboodu okirikiri nhọrọ ukwuu - họrọ njikọ na website Loderi.com. Mgbe iji anyị kiiboodu gị ọbịa nwere ike pịnye ma detuo ederede ka clipboard ihe niile dị ha mkpa n\_\_\_'ihi na gị website ma ọ bụ blog.
Ọzọkwa, gị ọbịa ga-achọghị na-aga n\_\_\_'ebe gị na saịtị ka achọrọ ederede na ya mba asụsụ. Na nke a, anyị nwere ike ikwu tinye anyị \_\_\_"mebere keyboard\_\_\_" na peeji nke gị na saịtị. Saiz kiiboodu (etiti) 665 x 445. Họrọ chọrọ asụsụ anyị mebere kiiboodu koodu ma detuo ya na saịtị ahụ.